Ha na genetically gbanwee ehi ka ha nwee ike iguzogide okpomoku uwa | Netwọk Mgbasa Ozi
Somezọ dị oke egwu iji nyere ụmụ anụmanụ na osisi aka ịnagide nsogbu nke na-eme ka ụmụ mmadụ na-akawanye njọ bụ gbanwee DNA gị ime ka ha ghara iguzogide okpomoku zuru uwa. Nke ahụ bụ kpọmkwem ihe ndị na-eme nchọpụta na Mahadum Florida ji ehi na-eme.
Animalsmụ anụmanụ ndị a bara nnọọ uru maka ụmụ mmadụ, ya mere, ọ bịara dị ezigbo mkpa iji hụ na ha ga-anọgide na-adị.
N'otu ụzọ ahụ na otu ụdị, ma ọ bụ anụmanụ ma ọ bụ ihe oriri, enwere ike inwe ụdị dị iche iche dị iche iche, n'ihe gbasara ehi otu ihe ahụ na-eme. Maka nke a, otu ndị nyocha, gụnyere Prọfesọ Raluca Mateescu si na Ngalaba Na-ahụ Maka Animal Sciences nke UF / IFAS nke Mahadum Florida Institute of Food and Agricultural Sciences, na-enyocha brangus ehi, nke kachasị anabata okpomọkụ. Nke a bụ obe n'etiti ụdị Angus na Brahman.
Iji mee nke a, ha anatala ego gọọmenti etiti afọ atọ maka $ 733. Na ya, ha ga - enwe ike ịchọpụta ngalaba DNA nke ụdị abụọ ahụ, nke ga - enyere ha aka ịmata Kedu akụkụ nke DNA dị mkpa maka ịhazi ahụ ọkụ nke anụmanụ ahụ, dị ka Mateescu si kwuo.
Ihe dị ka 40% nke ehi ehi na-achọta na United States. Iji mezuo anụmanụ ndị a na-emegharị ka mma maka ọnọdụ ibi ọkụ na nke nwekwara anụ ka mma, ndị na-eme nchọpụta ha choro ichoputa n'ime ogologo oge site na iji ihe eji eme genomic ka ha si mee ka ha nwekwuo ndidi na ikpo oku.
Obi abụọ adịghị ya na nke a bụ nyocha na, n'okwu nke Mateescu, "na-enye ụzọ ọhụrụ dị ike iji merie ihe ịma aka nke mgbanwe ihu igwe ma zụlite anụ ụlọ na-arụpụta ihe. Ma gịnị banyere gị, gịnị ka i chere banyere mkpụrụ ndụ ihe nketa nke ụmụ anụmanụ?
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu, pịa ebe a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Ha na genetically gbanwee ehi ka ha nwee ike iguzogide okpomoku uwa